I-CNC Turning Center, i-CNC Lathe Machine, abahlinzeki nabakhiqizi baseChina
+ 86-15318444939 I-imeyili: Sales@tsinfa.com
Umshini Wokugaya Wendawo Yonke
Universal Kuqondile Milling Machine
Universal ovundlile Milling Machine
Drilling futhi Milling Machine
Metal Lathe Umshini
Isikhungo se-CNC Turning
CNC ipayipi ngentambo lathe
IMETSHINI YOKWAKHA IMETSHINI
Umfutholuketshezi Cindezela Umshini
Umfutholuketshezi Ishidi Metal Shear Machine
Umshini we-Hydraulic Sheet Bending Machine
Isihlalo se-Saddle Surface Grinder TSA40100
Isihlalo se-Saddle Surface Grinder TSA2050
Manual Surface Sander M618
Ulapha: Ikhaya1 / I-CNC Turning Center, i-CNC Lathe Machine, abahlinzeki nabakhiqizi C ...
HIGH PRECISION MULTI AXIS CNC WOKUVULA ISIKHUNGO
I-Tsinfa umphakeli nochwepheshe we-CNC umshini wokujika e-China. Isikhungo sokujika se-CNC sinemisebenzi ephelele, ikhwalithi ephezulu yemishini, nejubane elikhulu. Ikakhulu esetshenziselwa ukucubungula izingxenye ezijikelezayo, imvamisa ingagcwalisa ngokuzenzakalela indawo eyindilinga, indawo eyindilinga, indawo eyindilinga, imishini, indawo yokugaya nokucubungula intambo, nakho kungacubungula indawo eyinkimbinkimbi yokujikeleza, njenge-hyperboloid. Ama-eksisi amaningi angangezwa ngokuya ngesidingo: c i-axis lathe, 3 axis lathe, 2 axis lathe, 5 axis CNC lathe, 4 axis CNC lathe.
Ukusebenza kahle okuphezulu: Esikhungweni se-CNC sokujika, ngemuva kokuthi umsebenzi uvinjelwe kanye, ungaqedela izingxenye zokujika, ukugaya, ukubhoboza, ingibe, ukucubungula intambo, nezinye izinqubo zokucubungula.
Ukuqina okuqinile: Umbhede uphathwa ngokukhethekile ukuqeda ukucindezeleka kwangaphakathi.
Ngokunemba High: I-lathe ye-CNC isebenzisa ngqo i-servo motor ukubona ukunyakaza kokuphakela ngebhola le-screw drive slip kanye nethuluzi lokuphumula, ngakho-ke isakhiwo sohlelo lokuphakelayo senziwe lula kakhulu.
Imibuzo? noma udinga inani?Sishayele ku- + 86-15318444939, bese ukhuluma nomunye wabachwepheshe bethu.Ungaphinda ugcwalise ifomu lethu: lokuxhumana.
CNC ovundlile ukuvula umshini ukudayiswa:
TFA40 CNC ukuvula umshini
Rotary ubukhulu 400mm, 30/45 degree enyakazayo embhedeni, elula chip ukususwa, ukuqina okuqinile
TFA40-S CNC turning isikhungo 3-eksisi
8 station cutter tower, milling, drilling, turning, kungacutshungulwa, CNC izinhlelo
TFA40B slant embhedeni CNC lathe 2-eksisi
Ububanzi bokujikeleza bungu-400mm, ubude bokucubungula bungu-500-1000mm, futhi umshini wokususa i-chip ungasetshenziselwa ukususwa kwe-chip okuzenzakalelayo.
TFA-8S CNC turning isikhungo 4-eksisi
Umbhoshongo wethuluzi lokuguqula isiteshi esingu-8, Amakhanda wamandla we-Angle angu-90, Amakhanda wamandla amane we-Angle
TFA50 CNC turning isikhungo
LTK uchungechunge embhedeni flat CNC lathe umshini
Intengo eshibhile, ububanzi obungu-360-16000mm, ubude bemishini 500-5000mm,
CNC ukuvula umshini ividiyo:
Asikwazi ngokwezifiso ngokuvumelana nezidingo zakho, xhumana nathi isixazululo kanye nekhotheshini
Inzuzo ye-CNC ukuvula umshini:
Izinga eliphakeme lokuzenzekelayo: Uhlelo lwe-CNC lokulawula, ngokuya ngobuchwepheshe bokucubungula bohlelo, izinqubo eziningi ziyaqedwa ngasikhathi sinye. Ingafakwa nge-hydraulic chuck, isihlalo se-hydraulic tail kanye nengalo yerobhothi yokulayisha okuzenzakalelayo kanye nokwehlisa ukucubungula, okusindisa kakhulu abasebenzi futhi kuthuthukise ukusebenza kahle kokukhiqiza.
Ukususwa okulula kwe-chip: umbhede wokutsheka ongakhethwa, i-iron chip ngokwemvelo iwela ebhokisini lokuqoqa i-chip, ingenziwa ngokususwa kwe-chainplate conveyor chip.
Ukuphepha okuhle: ukuvikelwa okuvalelwe ngokuphelele kuyamukelwa.
Ijubane eliphakeme: Ijubane elilinganisiwe le-Spindle liyatholakala kusuka ku-1600 kuya ku-4500 Rpm
Yini isikhungo sokuguqula i-cnc?
Ezivamile ukonga CNC lathes babe izimbazo ezimbili, X futhi Z. Turning isikhungo babe izimbazo eziningi, 3 izimbazo, 4 izimbazo, 5 izimbazo, njalonjalo. Ngaphezu komsebenzi wokujika nokugaya, unomsebenzi wokusebenza kahle kakhulu. Izikhathi nesikhathi sokubambeka ziyancipha.
Ukufingqa, isikhungo sokujika se-CNC sinezici ezilandelayo:
(1) Ukuzivumelanisa nezimo okuqinile, okulungele ukucubungula izingxenye ezinhlobonhlobo nezincane.
Esikhathini lathe othomathikhi othomathikhi noma semi-othomathikhi ukucutshungulwa ingxenye entsha, ngokuvamile kudingeka ulungise ithuluzi umshini noma umshini ithuluzi izesekeli, ukuze kube lula ukuyisebenzisa.
Ithuluzi lomshini lizivumelanisa nezidingo zokucubungula izingxenye, ngenkathi usebenzisa i-lathe ye-CNC ukucubungula izingxenye zezimo ezahlukene, idinga kuphela ukuphinda ihlele kabusha noma iguqule inqubo yokuchofoza
Uhlelo (isoftware) lungahlangabezana ngokushesha nezidingo zokucubungula futhi lufushanise kakhulu isikhathi sokulungiselela sobuchwepheshe sokufaka esikhundleni semishini yomshini
Ifanele ukuhlukahluka okuningi, ucezu olulodwa, noma ukucubungula okuncane.
(2) Ukunemba okuphezulu kwemishini nokuvumelana okuhle
Ngenxa yokuhlanganiswa kobuchwepheshe obuphakeme nobusha obufana nomshini nogesi, ukunemba kwemishini yamathuluzi womshini we-CNC ngokuvamile kuphakeme kunalokho kwamathuluzi wemishini ejwayelekile. Ukuthuthukiswa kwamathuluzi womshini we-CNC.
Inqubo yokwenza imishini ilawulwa yikhompyutha ngokuya ngohlelo lwangaphambilini lokufaka, eligwema izinga elibi lobuchwepheshe besisebenzisi.
Umehluko kwikhwalithi yomkhiqizo obangelwe umehluko. Kweminye imisebenzi yokusebenza enezimo eziyinkimbinkimbi, cishe akunakwenzeka ngamathuluzi wemishini ejwayelekile ukuthi ayiqede.
Kepha ithuluzi lomshini we-CNC lihlanganisa kuphela uhlelo olunzima kakhulu ukufeza inhloso, lapho kunesidingo futhi lingasebenzisa uhlelo olusizwa ngekhompyutha noma ikhompyutha ukubala
Ukucubungula okusizwa yikhompyutha. Ngaphezu kwalokho, inqubo yokwenza imishini yethuluzi lomshini we-CNC ayithinteki ekushintsheni ngokomzimba nangokomzwelo kwe-opharetha.
(3) Inomkhiqizo ophakeme nezindleko zokucubungula eziphansi
Ukukhiqizwa kwethuluzi lomshini ikakhulu kubhekisa esikhathini esidingekayo ukucubungula ingxenye, kufaka phakathi isikhathi sokuqondisa nesikhathi sokusiza. inombolo
Ijubane lokuphotha nejubane lokuphakela le-lathe lingalawulwa ezinhlotsheni eziningi, futhi umthethonqubo wejubane ongenantambo ungasetshenziswa. Ijubane lokusika elihle kakhulu lingakhethwa ngesikhathi semishini.
Ukuze uthuthukise imingcele yokusika, umkhiqizo wenziwa ngcono kakhulu,
Izindleko zokucubungula ziyancipha, ikakhulukazi ezingxenyeni zokukhiqiza ngobuningi, lapho i-batch iba nkulu, izindleko zokucubungula ziphansi.
Okwenziwa ngobuningi, ikakhulukazi ukukhiqizwa kwenqwaba, ukusebenza kahle nokusebenza kahle kufanele kugcizelelwe kwisisekelo sokuqinisekisa ikhwalithi yokucubungula
Ukuzinza kwenqubo, ubuchwepheshe bayo bokucubungula kanye neqoqo elilodwa elilodwa lihlukile. Isibonelo, ukukhethwa kwemidlalo, ukuhlelwa kwendlela yamathuluzi, nokuhlelwa kwamathuluzi
Indawo nokuhleleka kokusetshenziswa kufanele kubhekwe ngokucophelela, futhi okuqukethwe okufanele kuzokwethulwa esigabeni esilandelayo.
Okuphambene nokukhiqizwa kwesisindo ukukhiqizwa okukodwa. Isici esibaluleke kunazo zonke sokukhiqiza okukodwa ukuqinisekisa izinga lokuqala lokuphasa, ikakhulukazi ikhwalithi eyodwa.
Izingxenye ezinemimo eyinkimbinkimbi nezidingo zokunemba okuphezulu. Okwesibili, kuqhathaniswa nezinga lempumelelo lokukhiqizwa okukodwa. Ukukhiqizwa okukodwa
Inqubo ye-NC esetshenzisiwe yehlukile ekukhiqizweni ngobuningi ezicini zendlela yamathuluzi, ukuhlelwa kwamathuluzi, nokusetha iphuzu lokushintsha ithuluzi. Futhi ukukhiqizwa kwe-batch
Uma kuqhathaniswa nokukhiqizwa, ukukhiqizwa okukodwa kufanele kugweme isikhathi eside kakhulu sokulungiselela ukukhiqizwa.
Yiziphi izinhlobo zokuphenduka isikhungo?
Isikhungo sokujika ngokuvamile sisho ukungezwa kwemiphini eminingi ku-lathe ye-CNC, ukuze i-lathe ingabi nomsebenzi wokujika kuphela kepha futhi inomsebenzi wokugaya. 3-eksisi ukuvula umshini, 4-eksisi, 5-eksisi.
Ngokwe-engeli kombhede sitsheke, ingahlukaniswa yaba flat embhedeni ahlabayo isikhungo futhi bathambekele embhedeni ahlabayo isikhungo.
Ngokuya ngesikhundla sokuphotha, ingahlukaniswa ibe isikhungo sokujika mpo nendawo evundlile yokujika.
Ngokuya ngobubanzi obuhlukile be-rotary nobude bemishini, ingahlukaniswa ibe isikhungo sokujika esindayo nendawo yokujika elula.
Yikuphi ukuphepha okujwayelekile ekuphendukeni kwe-cnc?
Ngenqubo yokujika nesikhungo se-CNC sokujika, izinto zokuphepha eziyinhloko zimi ngale ndlela elandelayo:
1.When Uthi lokuphotha uzungeza ngejubane, uketshezi ahlabayo ngeke chaphaza phezu workpiece ligijima.
2 Umsebenzi osebenza ngesivinini esikhulu, kunengozi yokwenqatshwa
3. Ingozi yokushaqeka kagesi okubangelwa ukuvuza kwamandla
4. Iphutha lohlelo, okuholela engozini yokushayisana kwethuluzi.
Ngenxa yobungozi obungenhla, abasebenzi kudingeka ukuthi balandele imanuwali yokuphepha yokusebenza
1. Vala umnyango ovikelayo ngesikhathi semishini ukuvimbela ukusika uketshezi ekuqhumeni
2. Uma usebenzisa i-chuck ethembekile, qiniseka ukuthi uhlola futhi ukhiye i-chuck lapho ucindezela u-workpiece. Ngasikhathi sinye, vala umnyango ovikelayo, futhi ungami ngqo maqondana nomsebenzi.
3. Ukusetshenziswa ngokuphepha kukagesi kanye nokubeka phansi okuyikho. Lungisa okokusebenza ngaphandle kukagesi.
4 hlola inqubo ukuqinisekisa ukuthi ilungile ngaphambi kokucubungulwa.
Yimiphi imikhiqizo eyenziwe ngomshini wokugaya we-CNC nomshini wokujika?
- Imikhiqizo yenziwa nge-CNC milling
Izingxenye zebhokisi, izingxenye eziyinkimbinkimbi zomhlaba
Njengazo zonke izinhlobo zephephela, isondo lomhlahlandlela womoya, indawo eyindilinga, zonke izinhlobo zobuso ezakha isikhunta, uphephela kanye nemoto ehamba ngaphansi kwamanzi, nezinye izinhlobo zobuso befomu lamahhala, izingxenye ezinjalo zingacutshungulwa isikhungo semishini. Impeller ehlanganisiwe, isikhunta somjovo, isikhunta senjoloba, isikhunta sokwakha i-vacuum, isikhunta se-foam, isikhunta sokuphonsa ingcindezi, isikhunta sokuphonsa ngokunemba
- Imikhiqizo yenziwa ngomshini wokujika
I-CNC lathe ingacubungula imikhiqizo eminingi, kunzima ukuklelisa ngamunye ngamunye. Ngamafuphi, i-CNC lathe ikakhulukazi icubungula izingxenye zokujika, njenge-shaft, i-sleeve, i-disc, njll.
Imuphi umshini we-CNC osetshenziselwa ukuguqula izingxenye?
Ukuguqula uhlobo lwemodi yokuchofoza lapho umsebenzi ujikeleza futhi imoto ishayela isiphathi sethuluzi bese ishayela okuphakelayo kwethuluzi. Kunezinhlobo eziningi ze-lathe ezingakwazi ukwenza lolu hlobo lwemishini:
Umshini we-CNC ovundlile we-lathe, umshini we-CNC oqondile, umshini wokuguqula we-CNC.
Hlobo luni workpiece kuyinto CNC lathe efanelekayo ukucutshungulwa?
1. Izingxenye ezijikelezayo ezinentaba eyinkimbinkimbi noma okunzima ukulawula usayizi
Ngoba i-CNC isikhungo sokujika sinomsebenzi oqondile futhi oyindilinga wokuhumusha, kanti enye indawo yokuguqula i-CNC inomsebenzi wokuhlanganisa ongasiyisiyingi.
Ngomsebenzi wokuhlanganiswa kwejika, kungaguqula izingxenye ezijikelezayo ezakhiwe nganoma iyiphi ijika lendiza, kufaka phakathi izingxenye ngokubala okufanelekile.
2. izingxenye ngokunemba High
Izidingo zokunemba kwezingxenye ikakhulukazi zibhekisa kuzidingo zokunemba ngosayizi, ukuma, isikhundla, nobuso, phakathi kwazo ukunemba komphezulu ikakhulu kubhekise kuzo
ukuqina kobuso. Isibonelo, ukunemba kokuphakama kuphakeme, izingxenye ze-cylindrical ezinezidingo eziphezulu ze-cylindricity;
Izingxenye zesigaxa ezinezidingo eziphakeme zokuqondile, ukuzungeza nokuthambekela kolayini; izingxenye ezinezidingo eziphakeme zephrofayili yomugqa (ukuma okuhle kwentaba)
On the ngokunemba ekhethekile CNC lathe, ngokunemba contour weJiyomethri kungabuye ngomshini eliphezulu kakhulu.
3. Ukucubungula okokusebenza okuqinisiwe
Ekucutshungulweni okukhulu kwesikhunta, kunezingxenye eziningi ezinosayizi omkhulu nokuma okuyinkimbinkimbi. Ukuguqulwa kwalezi zingxenye ngemuva kokwelashwa kokushisa kuncane.
Kunzima ukugaya izingxenye eziqinisiwe ngenxa yobukhulu bazo obukhulu,
Faka esikhundleni sokugaya ngokujika ukuze uthuthukise ukusebenza kahle kokucubungula.
Ucezu lwe-4 ngenqubo eyinkimbinkimbi
Umsebenzi wokusebenzela udinga ukuvula umbuthano wangaphandle, ubuso bokugcina, indawo yokugaya ohlangothini, ukubhola. Lolu hlobo lomsebenzi wokusebenza ngokuvamile ludinga amathuluzi amathathu womshini wokucubungula, ama-lathes, imishini yokugaya, imishini yokubhola, ukulayisha nokulayisha izinto kuyinkinga kakhulu, ungathenga isikhungo sokujika ukuze usetshenzwe.
Izingxenye zomshini wokuguqula we-CNC
Idivayisi esetshenziselwe ukugcina okokusebenza ku-lathe ibizwa ngokuthi i-lathe fixture.
Izinto ezenziwa nge-Lathe zingahlukaniswa ngemidlalo ejwayelekile nemidlalo ekhethekile enemikhakha emibili.
Isimboni somhlaba wonke sibhekisa kwisisetshenziswa esifanayo esikwazi ukucindezela izinhlobo ezimbili noma ezingaphezu kwezimbili zezinto zokusebenza, isibonelo, i-three-jaw chuck, i-four-jaw chuck, i-clamp yasentwasahlobo, ne-mandrel yendawo yonke ku-lathe.
Umdlalo okhethekile ungumbonisi owakhelwe ukucubungula okokusebenza okucacisiwe kwenqubo ethile.
Uma ihlukaniswe ngokuya ngezinhlanganisela zezinto zokulungisa, kukhona izinto ezingeke zakhiwe kabusha nezingakhiwa ezingaphinde zenziwe kabusha, okwakamuva kubizwa ngokuthi i-modular fixture.
Umdlalo onekhwalithi ethembekile ungaqinisekisa ikhwalithi yomkhiqizo, uthuthukise ukusebenza kahle kokusebenza futhi wandise ububanzi bokusetshenziswa kwamathuluzi omshini.
Emsebenzini we-lathe, iningi lokusetshenziswa kwento yokusebenza noma ukuma okungenalutho kwe-cylindrical.
I-three-jaw chuck, ihlukaniswe yaba mathupha, ugesi, i-pneumatic, i-hydraulic ezintathu, ngokuya ngezidingo ezihlukile zekhasimende, ungakhetha. Ukuvula isikhungo ku-hydraulic chuck ukusetshenziswa okuningi, izinga eliphakeme lokuzenzekelayo. Ifanele ukucubungula i-batch.
Uma kuqhathaniswa ne lathes ezivamile, CNC lathes ngokuvamile zisebenzisa CNC ithuluzi umbhoshongo, ihlukaniswe izakhiwo mpo futhi enezingqimba. Kuneziteshi ezi-4, iziteshi eziyi-8 neziteshi eziyi-12 ongakhetha kuzo. Iziteshi eziningi, intengo iyenyuka. Izinhlobo ezihlukene zokushayela zingahlukaniswa ngemibhoshongo ye-hydraulic kanye nemibhoshongo kagesi. Ngokuvamile, intengo yombhoshongo kagesi ishibhile kakhulu. Ngokufaka uhlelo ohlelweni lwe-CNC, isinali lokukhipha uhlelo lwe-CNC embhoshongweni wokusika, ushintsho lwamathuluzi oluzenzakalelayo. Ukusebenza kahle okuphezulu.
I-tailstock ne-chuck zisebenza ndawonye ukulungisa okokusebenza. Isihlalo somsila sinesihlalo semisila sencwajana, isihlalo somsindisi wokubacindezela, isihlalo somsila womoya.
Umshini wokususa i-Chip: Lapho isikhungo sokujika sicubungulwa, kuzosikwa imfucumfucu, okulula ukuyiqongelela isikhathi eside. Umshini wokususa i-chip ungasetshenziselwa ukususwa kwe-chip. Insimbi eyilahliwe izothuthelwa emotweni yangaphandle ngochungechunge lwamaketanga ukuze ithole ukwelashwa okuhlangene.
Umshini we-Metal Lathe
CNC Pipe Ukuchusha Lathe
Ovundlile Metal Cutting Band Saw
Abasebenzi abanamakhono ayi-100 +.
Isipiliyoni seminyaka engu-15 +
Yenziwe ngani iminyango yezokuphepha?
Ungayisebenzisa Kanjani i-Metal Lathe: Ukusebenza Komshini Wokulahla Umbhede we-Gap
Uyini umshini we-Metal Lathe? Sebenzisa, Incazelo, Ukusebenza, Izingxenye, Umdwebo
Ithuluzi Lomshini Umhlinzeki waseChina
Ucingo: + 86-15318444939
Ucingo: + 86-632-5656658
7 * 24 Amahora
Ayikho i-6 Industrial Area Park, iDadi Road, Tengzhou, Shandong, China
Imininingwane 2010-2030 © Shandong Tsinfa CNC Equipment Co., Ltd.